जुन पार्टीको झन्डा विदेशीको जस्तो, पार्टीको नाम विदेशीको जस्तो, ज्ञानेन्द्र शाहको भोज खाने,दूतावासबाट महिनावारी तलबभत्ता बुझ्नेले मधेशी जनतालाइ भ्रममा पार्दैछन् – Sanghiya Online
जुन पार्टीको झन्डा विदेशीको जस्तो, पार्टीको नाम विदेशीको जस्तो, ज्ञानेन्द्र शाहको भोज खाने, दूतावासबाट महिनावारी तलबभत्ता बुझ्ने, आन्दोलनभन्दा बैठक कोठामा रमाउने, थ्रेसहोल्डको डर र मालिकको आदेशमा लहरै लाईनमा उभिएर एकता गर्ने, शिखण्डी र दलालहरुको झुण्ड परिचालन गरी अरुलाई बद्नाम गराउने राजपा जस्तो बहुरंगी भगवा पार्टीले उपेन्द्र यादवमाथि मधेशको मुद्दा छाडेको वाहियात आरोप कुन नैतिकताको आधारमा लगाउन सकेको होला ? भ्रम र जिहालत गर्न मारिह राजपा पक्षधरले उपेन्द्र यादवलाई अझ राष्ट्र, राष्ट्रियता, मधेश सवाल र अधिकारको पाठ नसिकाए हुन्छ ।
चुनाव र सरकारमा जान राजपा आफै आतूर छ, तर पहाडी क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच छ, न उम्मेदबार, न मतदाता, अनि कसरी उम्मेदबारी देओस् राजपाले ? मधेशका जिल्लाहरुका लागि निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएर बसेको राजपाले हेर्दै जाऊ दोस्रो चरणको चुनावमा ऊ सबभन्दा पहिले उम्मेदबारी दिनेछ । संशोधन प्रक्रिया बढेसँगै चुनावमा जानेगरी सरकरसँग सहमति गर्ने राजपा नेता नै हुन् । अनि चुनावमा गयो भनेर अरुलाई आरोप लगाउने ?
राप्रपाका १० जना सांसद गायब नभएको भए अस्ति नै संशोधन पास भइसक्थ्यो, ज्ञानेन्द्र शाह, केपी ओली र प्रतिगमनकारी शक्तिले षड्यन्त्र नगरेको भए । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको छ । त्यो ढिलो चाडो पास हुन्छ नै । चुनाव एउटा प्राविधिक पक्ष हो, यसको अर्थ कसैले मुद्दा छाडेको होइन । उपेन्द्र यादवको संघर्ष, राजनीतिक जीवन, योगदान, उनले उठाएको राष्ट्रिय मुद्दा र निष्ठामाथि कसैले शंका गर्नु भनेको मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथि प्रहार गर्नु हो ।
कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, संविधान संशोधन, चुनाव र संघर्ष एकैसाथ जारी छ । राजपालाई सुझाव, संघर्षको एउटै रथमा सवार योद्धाहरु विचलित हुनु हुन्न । अरुलाई बद्नाम गर्नु त झन् निन्दनिय छ । जनता परिपक्व छन्, कसैले उचालेर स्वार्थसिद्ध हुँदैन । सहकार्य गर्नुपर्नेमा आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न कसैका विरुद्ध नियोजित रुपले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भनेको अधिकारको मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउनु हो, यो यथार्थलाई राजपाले जतिसके चाडै बुझ्दा राम्रो ।